We Fight We Win. -- " More than Media ": ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပမယ့် ရှစ်လေးလုံး ငွေရတုကို မိုးသီးဇွန် တက်မယ်
ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပမယ့် ရှစ်လေးလုံး ငွေရတုကို မိုးသီးဇွန် တက်မယ်
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့မှာ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ရှစ်လေးလုံး ငွေရတု အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီအခမ်းအနားကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရောက် ရှစ်လေးလုံး ကျောင်းသား
ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမိုးသီးဇွန် တက်ရောက်ဖို့ ရှိပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့လက ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ အမေရိကန်လာစဉ်က အတူတွေ့ရတဲ့ ဦးမိုးသီးဇွန်
ရှစ်လေးလုံးကာလ ထင်ရှားတဲ့ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမိုးသီးဇွန်ဟာ အဆိုပါ ရှစ်လေးလုံး ငွေရတု အထိမ်းအမှတ်ပွဲ တက်ရောက်ဖို့ မြန်မာသံရုံးက ဗီဇာ ရပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးမိုးသီးဇွန်က ဧရာဝတီကိုပြောပါတယ်။
"ကျနော် ဗီဇာ ၃ လ ရထားပြီးပါပြီ" လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံး ကာလ ၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာတော့ ဗကသ လို့ အမည်ရှိတဲ့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂကို ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂ ရင်ပြင်မှာ ကြေညာခဲ့စဉ်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ကိုကိုကြီးနဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ကိုမိုးသီးဇွန်တို့ ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၆ နှစ် အကြာ မှာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂကို ပြန်လည် အသက်သွင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဦးမိုးသီးဇွန်ရဲ့ မြန်မာပြည် ဒီတခေါက်သွားမယ့်ခရီးဟာ ဒုတိယ အကြိမ်ဖြစ်ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံး သွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာ တချိန်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လို ပါဝင်ကူညီလုပ်ဆောင်ရမလဲ ဆိုတာတွေလည်း ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာပါ။
ဦးမိုးသီးဇွန် ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ
ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်လည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက မထွက်ခွာခင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံးကာလ ထင်ရှားတဲ့ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် အဖြစ်ကနေ လူငယ်ကျောင်းသားများ အများစု စုဖွဲ့ထားတဲ့ ထိုစဉ်က ဒုတိယ အကြီးဆုံး အတိုက်အခံ ပါတီ ကြီးတခုဖြစ်တဲ့ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်လည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
သူ့ အ မြင်
မြန် မာ နိုင် ငံ အ လယ် ပိုင်း က မူ လ တန်း ကျောင်း လေး မှာ ပေါ့ ဆ ရာ မ က ကျောင်း / သူ တွေ ကို သူ မ ဟာ ကြံ့ ခိုင် ရေး ပါ တီ ဝင် ဖြစ် ကြောင်း နဲ့ ယ ခု လက် ရှိ သ မ တ ကြီး က လဲ ကြံ့ ခိုင် ရေး ပါ တီ က ဖြစ် ကြောင်း ဂုံ ယူ စွာ ပြော ပြ နေ တယ် ။
ပြီး တော့ ဆ ရာ မ က ကျောင်း / သူ တွေ ကို မေး လိုက် တယ် " က လေး တို့ ကြံ့ ခိုင် ရေး ပါ တီ နဲ့ သ မ တ ကြီး ကို ထောက် ခံ တယ် ဆို ရင် လက် ထောင် ပါ " ။
မြ မြ က လွဲ ရင် အား လုံး လက် ထောင် ကြ တယ် ။
ဆ ရာ မ အံ့ ဩ စွာ နဲ့ မေး လိုက် တယ် " မြ မြ ဘာ လို့ လက် မ ထောင် တာ လဲ ? "
မြ မြ ။ ကျွန် မ ကြံ့ ခိုင် ရေး မ ဟုတ် လို့ ပါ ။
ဆ ရာ မ ။ အဲ ဒါ ဆို သ မီး က ဘာ လဲ ?
မြ မြ ။ ကျွန် မ NLD ပါ အဲ ဒီ အ တွက် ဂုံ ယူ ပါ တယ် ။
ဆ ရာ မ ကိုယ့် နား ကို တောင် မ ယုံ နိုင် အောင် ဖြစ် သွား တယ် ။ ချက် ချင်း ပဲ " မြ မြ ၊ သ မီး ဘာ လို့ NLD ဖြစ် တာ လဲ ? "
မြ မြ ။ ကျွန် မ အ ဖေ ရော အ မေ ရော NLD ဆို တော့ သ မီး လဲ NLD ဖြစ် သွား တာ ပေါ့ ။
ဆ ရာ မ လဲ စိတ် ပျက် လက် ပျက် ငြီး တွား လိုက် တယ် " မိ ဘ NLD ဖြစ် လို့ သား သ မီး လဲ NLD လိုက် ဖြစ် တယ် ဆို တာ လုံး ဝ မ ဖြစ် သင့် ဘူး "
ချက် ချင်း ပဲ ဆ ရာ မ က ဆက် ပြော လိုက် တယ် " ဒီ မယ် မြ မြ တ ကယ် လို့ သ မီး အ ဖေ က သူ ခိုး ဖြစ် ပြီး တော့ သ မီး အ မေ က လူ လိမ် ဆို ရင် သ မီး ဘာ လုပ် မှာ လဲ ? "
မြ မြ ။ " အဲ ဒါ ဆို သ မီး တို့ အား လုံး ကြံ့ ခိုင် ရေး ဖြစ် သွား မှာ ပေါ့ "